दुलाहा खोज्दै प्रियङ्का | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← पाकिस्तानमा आत्मघाती आक्रमण, ७० भन्दा बढी अर्धसैनिकको मृत्यु
६ पूर्वगृहमन्त्रीलाई गाडी फर्काउन निर्देशन →
दुलाहा खोज्दै प्रियङ्का
Posted on 13/05/2011 by नारायण नेपाल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
बलिउड नायिका प्रियङका चोपडालाई ‘ड्रिम गर्ल’ कल्पना गर्ने हजारौ होलान् । रुपले धपक्कै बलेकी यस्ती सुन्दरीलाई बिहे गर्न नचाहने को होला र ? पछिल्लो समयमा भारतीय टीभी च्यानलद्वारा प्रसारित रियालिटी शोहरुमा प्रियङ्काले धेरै पटक नक्कली बिवाह गरी सकेकी छिन् । फिल्मभित्रको त कुरै छाडौं । तर प्रियङ्काले वास्तविक जीवनमा भने असली लाइफ पार्टनर नभेटेको बताइन् । आफू आजै बिहे गर्न तयार भए पनि सपनाको राजकुमार भेटी नसकेको उनले बताइन् ।
तपाईलाई कस्तो वर चाहिएको छ ? भन्ने प्रश्नमा पि्रयङ्काले केबल आफूलाई धेरै चाहने अनि माया गर्ने पार्टनर हुनुपर्ने बताइन् । सामान्य युवतीहरुलाई जस्तै हिरा अति नै बढी मन पर्ने उनको भनाइ छ । कुन्दन जडान गरिएको गहना पनि मन पर्ने प्रियङ्काले थपिन् । फिल्म क्षेत्रमा प्रवेसपछि पहिलो कमाइले १.५ करेटको हिरा किनेको सम्झना उनलाई अझै ताजा छ । उक्त हिरा अहिले पनि उत्तिकै प्यारो छ प्रियङ्कलाई ।
लाखौ फ्यानको धनकन बनेकी प्रियङ्लाई उनले अभिनय गरको फिल्मको प्रसङ्गमा छेडछाड हुनु सामान्य घटना बनेको छ । यसलाई उनी दर्शकको मायाको चिनोको रुपमा लिन्छिन् । डन-२ को शुटिङ भर्खरै सिध्याएकी पि्रयङ्का अहिले ‘बर्फी’मा ब्यस्त छिन् । बहुचर्चित फिल्म डन-२ को शुटिङ्को दौरानमा बलिउडका अर्का बादशाहा नायक शाहरुख खान, फरहान अख्तरलगायत पुरै टिमसँगको काम गर्दा निकै मजा आएको उनले बताइन् । बलिउड फिल्म उद्योगमा निकै सफल बनेकी प्रियङ्का आफ्नो जीवन साथी पाउन कहिले सफल हुन्छिन्, त्यसको लागि भने केहि समय अझै कुर्नु पर्ने छ ।